tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-23
Ny Aircraft Cup dia vokatra ara-pananahana malaza ho an'ny lehilahy ary afaka mamaly ny filan'izy ireo amin'ny filokana. Nefa mihamaro ny olona te hahalala raha manimba ny fahasalaman'ny olona izany? Ireo fitaovana ampiasaina hanamboarana ireo kaopy mihetsiketsika dia natao indrindra amin'ny silika malefaka tsy misy poizina, miaraka amin'ny halemem-panahy ...
Kilasy fitiavana: inona ny atody mitsambikina?
Ny atody mitsambikimbikina dia vokatra fanaovana firaisana ara-nofo vehivavy, mahafatifaty kely ampiasaina amin'ny filalaovana vady sy vady. Ny atody mitsambikina dia misy fiasa hovitrovitra, mba hanohizan'ny vehivavy ny orgasme. Izy io dia misy fiatraikany tsara amin'ny fitsaboana ny tsy firaikana ara-nofo amin'ny vehivavy, ny tsy fisian'ny orgasme ary ny aretina hafa. ...
Manodidina ny fanontaniana 9 malaza indrindra amin'ny kilalao fanaovana firaisana, Makà valiny eto!
avy amin'ny admin tamin'ny 20-09-09
Ny vokatra ara-nofo dia zavatra tsara hanampiana ny lehilahy sy ny vehivavy hankafy ny firaisana amin'ny tsara kokoa. Ny fitaovam-pananahana dia kilalao tsara ahafahan'ny olona mankafy orgasme sy fahafinaretana, ary tsy mila saro-kenatra manoloana izany izy ireo, fitaovana mahasalama sy mahafinaritra izany. 1, ny fitaovam-pananahana dia mety hiteraka tsy firaharahana ara-nofo？ Ny marina: ...